Zlatan Ibrahimovic oo diiday inuu meesha ka saaro dib ugu laabashada Yurub | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Zlatan Ibrahimovic oo diiday inuu meesha ka saaro dib ugu laabashada Yurub
Los Angeles (SONNA)- Zlatan Ibrahimovic ayaa iska diiday inuu meesha ka saaro rajadii uu ka lahaa inuu ku laabto Yurub kaddib marka uu ka tago sanadkan Los Angeles Galaxy.
Xiddiga reer Sweden ayaa dhammaystiray u dhaqaaqistiisa horyaalka MLS-ka Mareykanka bishii Maarso ee sanadkii 2018-kii, waxaana uu u dhaliyey 52 gool 56 kulan oo uu saftay, laakiin waxa ay u muuqataa inuu tagayo marka uu qandaraaskiisa dhammaado sanadkan.
Ibrahimovic qaab ciyaareedkiisii ugu dambeeyay ee qaaradda Yurub wuxuu yimid isagoo matelayey Manchester United, halkaasoo uu ku riyaaqay xilli ciyaareed cajiib ah, isagoo dhaliyay 28 gool, ka hor inta uusan dhaawac jilibka ka soo gaaray soo gabagabayn waqtigiisii garoonka Old Trafford.
Markii la weydiiyey haddii uu weli doonayo inuu ka ciyaaro horyaalka Serie A, 38-sano jirkaan ayaa u sheegay Sky Sports Italia: “Boqolkiiba boqol (100%), waan ogahay inaan wali isbedel ka sameyn karo, Talyaaniga iyo Waddamada kaleba.”
“Waan ka fiicnaan lahaa ciyaartoyda haatan halkaas joogta, qandaraaskeygu waxa uu ku egyahay bisha December, mana aqaano waxa dhici doona intaas kaddib.”
Zlatan ayaa qibrad hore u leh horyaalka Serie A-da Talyaani, isagoo ku raaxeysanaya guulo waa weyn oo uu la qaatay Inter Milan, halka sidoo kale uu soo metelay AC Milan.
Isagoo xirfaddiisa ciyaareed ee heerka kooxaha ku soo jiray muddo 20 sano ah, Ibrahimovic wuxuu dhaliyay 473 gool 786 kulan uu u saftay, waxaana intaas dheer inuu 62 gool u dhaliyay xulkiisa Sweden.
Previous articleNemanja Matic oo aan ku faraxsanayn Old Trafford, alabaabadana u furay inuu u dhaqaaqo dalka Talyaaniga
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo gaaray Dalka Itoobiya+Sawirro